सन्तोष देउजालाई एक्का’सी के भयो ? चितवन मेडिकल कलेजमा सल्यक्रिया गरिदै – Sandesh Press
June 30, 2021 459
पत्रकार तथा युट्युवर सन्तोष देउजाले आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गर्दै आफु विरामी भएको र रोगसँग केहि गर्न नसकिने रैछ भनेर सेयर गरेका छन्।
चितवनमा रहेको चितवन मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका छन्। उनको सल्यक्रियाको लागि भर्ना भएको र छिट्टै सन्चो भएर आउने बताएका छन्। हेर्नुहोस उनले फेसबुकमा यस्तो सेयर गरेका थिए :
Prevभाइरल तस्बिरका युवा-युवती को हुन् ? उनीहरूले खोले त्यो दिनको बास्ताविकता !
Nextधन कमाउन साउदी अरेबिया गएका १ सय ८ जना नेपाली’को मृ’त्यु !
काठमाडौँ आउँदै गरेको बस पल्टिँदा ३८ जना घाइते, कस्तो छ अवस्था ?
लमजुङ केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्पको धक्का महसुस
पिडित गायिकाकी नजिककी दिदीले लिभिङ्ग रिलेसन र प्रमाणको गरिन् खुलासा (भिडियो सहित)